Hery manozongozona izao tontolo izao
“Amin'ny teny fahamarinana, amin'ny herin’Andriamanitra amin'ny fiadian'ny fahamarinana, na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia”.- 2 Kôr. 6:7.
Ny iraka izay nampanaovin’i Kristy ny mpianany dia notanterahany. Raha nandroso hitory ny filazantsara ireo mpitondra hafatry ny hazo fijaliana ireo dia nisy fanamba­ràna ny voninahitr'Andriamanitra, izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay, nambaran'olombelona mety maty. Noho ny fanampian'ny Fanahin'Andriamanitra dia nahavita asa izay nanozongozona izao tontolo izao ny apôstôly. Tonga tany amin' ny firenena rehetra ny filazantsara tao anatin’ny fotoan'ny taranaka iray monja.
Be voninahitra ny vokatra nano­loana ny fikambanan'ireo apôstôly voafidin'i Kristy. Tany am-piando­han'ny asany dia olona tsy nahita fianarana ny sasany tamin'izy ireo, kanefa ny fanoloran-tenan'izy ireo ho an'ny Tompony dia tanteraka, ary nahazo fanofanana ho amin' ilay asa lehibe nanirahana azy izy ireo teo ambany fitarihany. Nanjaka tao am-pony ny fahasoavana sy ny fahamarinana, nanolo-tsaina azy ny amin'ny tanjony sy nifehy ny asany. Niafina niaraka tamin'i Kristy tao amin’Andriamanitra ny fiainan'izy ireo, ary tsy hita intsony ny izahony, difotra lalina tao anaty fitiavana tsy manam-petra (...). I Jesôsy Kristy, Ilay fahendrena sy herin'Andriamanitra, no lohahevitry ny resaka rehetra (...) Rehefa nanambara ny fahafenoan'i Kristy, Ilay Mpamonjy nasandratra izy ireo, dia nanetsika fo maro ny tenin'izy ireo, ary lehilahy sy vehivavy maro no azo ho an'ny filazantsara. Marobe ireo nanka­hala ny anaran'ny Mpamonjy sy nanao tsinontsinona ny heriny no indro, izao nanambara ny tenany ho mpianatr'ilay nohomboana teo amin'ny hazo fijaliana.
Tsy tamin'ny herin'ny tenan'izy ireo no nahatontosan'ny mpianatra ny iraka nampanaovina azy fa tamin'ny herin'Ilay Andriamanitra velona. Ny fahafantarana tsara ny andraikitra napetraka tamin'izy ireo dia nanadio sy nampitombo ny fanandramany; ary voaseho tao amin'ireo fandresena azony ho an'i Kristy ny fahasoavan'ny lanitra. Tamin'ny heriny mahefa ny zavatra rehetra dia niasa tamin'ny alalan'izy ireo Andriamanitra mba hahatonga ny filazantsara handresy.
Tahaka ny nanirahan'i Kristy ny mpianany no anirahany ireo mambran'ny fiangonany koa ankehitriny.Ny hery nananan'ny apôstôly dia ho azy ireo koa.. Raha ataon'izy ireo ho heriny Andriama­nitra dia hiasa miaraka amin'izy ireo Izy, ary tsy ho foana ny asan' izy ireo. Aoka izy ireo hahalala fa ny asa izay irotsahan'izy ireo an­tsehatra dia ilay nametrahan'Andriamanitra ny tombokaseny eo amboniny (...) Manolo-kevitra antsika Izy handroso hanambara ireo teny nomeny antsika, sady hahatsapa ny fikasihany masina ny molotsika.